YouTube ayaa dadka ku caawinaya aragtida ah in dunidu tahay mid fidsan, sida lagu sheegay cilmi-baaris - BBC News Somali
YouTube ayaa dadka ku caawinaya aragtida ah in dunidu tahay mid fidsan, sida lagu sheegay cilmi-baaris
Cilmi-baaris ayaa lagu ogaaday in barta intarneedka ee YouTube ay door muhiim ah ka qaadatay in dadka qaar ay ku qancaan in dunida aan ku dul nool nahay ay tahay mid fidsan.
Dadka daraasaddani lagu wareystay ayaa intooda badan soo xiganayay muuqaallo ka daawadeen barta YouTube.
Dadkani ayaa waxaa maskaxdooda badalay oo saameyn ku yeeshay muuqaallo ay daawadeen kuwaasi oo muujinayay caddeymo ah in dunida aan ku nool nahay ay tahay mid fidsan oo aan u sameysnayn sida kubbada oo kale.
Khubaradii daraasaddan sameysay ayaa barta YouTube kula talisay in ay u baahan tahay in ay macluumaadkeedu ku saleyso xaqiiqada oo ay xaqiijiso in dadka soo booqanaya ay helaan macluumaad sax ah.
Sawirro: Dayax madoobaadkii xalay dunida ku habsaday
Xaaladda duurjoogta dunida oo laga dayrinayo
"Macluumaad badan oo muhiim ah ayaa ku jira YouTube balse sidoo kale waxaa ku jiro macluumaadyo khaldan," ayay yiri Prof Asheley Landrum oo ka tirsan Jaamacadda Texas Tech, taasi oo sameysay daraasaddani.
Hannaanka uu isticmaalo YouTube ee dadku ay ku kala xushaan macluumaadka ay u baahan yihiin ayaa laga yaabaa bey yiri Prof Landrum in loo sameeyay qaad jahawareerinaya dadka.
"In aad rumeysan tahay in dunidani tahay mid fidsan ma ahan wax xun balse waxay shaki gelinaysaa kalsoonidii lagu qabay goobaha cilmiga laga barto," ayay tiri.
Daraasaddan ayaa lagu wareystay 30 qof oo ka qeybgalayay shirar u saabsan qaab dhismeedka dunidan aan ku nool nahay.
Dadkii daraasaddan lagu wareystay ayaa shaaciyay in YouTube uu u soo bandhigay muuqaallo muujinaya in caalamka aan ku nool nahay uu yahay mid fidsan.
Dadkani qaarkood ayaa sheegay in muuqaalladaasi ay daawadeen ka dibna ay ku arkeen waxyaabo khalad ah balse markii dambe ay ku qanceen caddeymaha ku jiray muuqaalladaasi ee muujinayay in dunidu tahay mid fidsan.
Natiijada daraasadda Prof Landrum ayaa la shaaciyay toddobaadkan.
Prof Landrum waxay sheegtay in loo baahan yahay in khubarada cilmi seyniska ay soo saaraan muuqaallo jawaab u ah muuqaallada ku jira YouTube ee dadka ku qancinaya in dunidu tahay mid fidsan.
"Waxa kaliya ee ay tahay in aan la dagaallanno ayaa ah macluumaadka khaladka ah ee la faafinayo, waana in aan kala hortagnaa macluumaad sax ah," ayay tiri Prof Landrum.